गृह सजावट Archives - बडिमालिका खबर
बढ्दो महंगी र बदलिंदो जीवनशैलीले गर्दा अहिले परिवारको आकारमा परिवर्तन आएको छ । पहिले जस्तो तीन-चार जना सन्तान जन्माउने चलन अहिले कमै छ । अहिले श्रीमान्-श्रीमती दुवै कामकाजी हुन्छन् । समय अभावका कारण र बच्चाको लालनपालनमा ध्यान दिन सजिलो होस् भनेर धेरै दम्पतीले अहिले एउटै सन्तानमा चित्त बुझाउन थालेका छन् । यसरी परिवारलाई खुम्चाएर एउटा […]
भारतमा केटीहरुको विवाह गर्ने उमेर १८ बाट २१ बनाइयो, नेताहरुले गरे विरोध
नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले केटीहरुको विवाह गर्ने उमेर बढाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले केटी मान्छेहरुको विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षबाट २१ वर्ष बनाएको छ। यो निर्णयलाई लिएर अहिले भारतमा विवाद सुरु भएको छ। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध मुस्लिम नेताहरु र धार्मिक गुरुहरुले विरोध जनाएका छन्। मुस्लिम नेताहरुले केटीहरुको विवाहको उमेर १८ भन्दा धेरै नहुनुपर्ने माग […]
विवाहपछि दम्पतीको व्यवहार किन बद्लिन्छ ?
नवविवाहित जोडीमाथि गरिएको एक सर्वेक्षणबाट अनेकौं रोचक तथा अचम्मलाग्दा तथ्य बाहिर आए । त्यसमा भनिएको छ- यो अनुसन्धानबाट थुप्रै अचम्मलाग्दा कुरा बाहिर आए, जसबाट नवविवाहित जोडीमा परस्परको प्रेम कुन हदसम्म आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा पाइन्छ । महिलाका तुलनामा पुरुषलाई जीवनसाथीबाट स्नेहको चाहना बढी हुन्छ । विवाहपछि श्रीमती आफ्ना श्रीमानले विवाहअघि भएका सबै खराब आचरणको त्याग […]
घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको भण्डारका अनेक तरिका हुन्छन् । यसको लागि या त सिसाको बोतल÷डिब्बा प्रयोग हुन्छन् या त प्लास्टिकका । दैनिक उपभोग्य तेल, घिउ जस्ता पेय पदार्थ होस् या अन्य ठोस वस्तु नै । सबैको भण्डारको लागि प्रयोग हुने यस्ता सिसा र प्लास्टिकका भाँडाहरु मानव स्वास्थ्यको लागि कति लाभदायक र हानिकारक हुन्छ ? गाई÷भैंसीको […]
सम्बन्ध र स्वास्थ्यको तालमेल एक–आपसमा उल्झिएको छ । तपाईंले धेरैजसो सुन्नुभएको होला कि विवाहपछि मानिसहरु मोटो हुन्छन् र वा पातलो हुनका लागि अविवाहित नै बस्नुपर्छ । यद्यपि, विज्ञ यो कुरा अस्विकार गर्छन् । उनीहरुका अनुसार हरेक सम्बन्ध र हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व भिन्न हुन्छ । विज्ञले एक्लो बस्नुका फाइदा र हानीबारे बताएका छन् । आउनुहोस्, यसबारे […]
देशभरका मुख्य शिवालय सुनसान
कोरोनाको भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी नगरिएको भए आज बिहानैदेखि पशुपतिमा तीजका बर्तालु लाखौँ महिलाको भीड हुन्थ्यो। भीड व्यवस्थापन गर्न हजारौँ सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक पनि खटिएका हुन्थे। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन बिहान पशुपति क्षेत्रमा लाखौँ बर्तालु महिला देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गर्न पुग्थे। यस वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र […]
आज हरितालिका तीज, स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमको पालना गर्दै मनाउन आग्रह
भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ । धार्मिक विश्वास अनुसार सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने बरदान पाएकी थिइन् । […]
हरितालिका व्रतको तयारीस्वरुप आज दर खाने तयारीमा नेपाली महिला छन् । दरखाने दिनसँगै चारदिने तीज पर्व आजदेखि शुरु हुँदैछ । विशेषगरी नेपाली नारीले मनाउने तीजको पहिलो दिन दर खाइन्छ । माइतीले चेलबेटीलाई बोलाई दर खुवाउने परम्परा भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण धेरै महिला घरमै छन् । बुधबार मध्यरातदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एवं […]
एजेन्सी – नेपाली परम्परामा दही र चिनी शुभसाइतका लागि खाने प्रचलन रहेको छ । तर, वैज्ञानिक रुपमा खाली पेटमा दही र चिनी खाँदा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ । दहीलाई चिनीमा मिसाएर खाँदा यसले क्याटालिस्टको काम गर्छ जुन शारीरिक र मानसिक रुपमा फाइदाजनक हुन्छ । ‘सुपर फुड’ दहीलाई सुपर फुड मानिन्छ । यसमा थुप्रै गुणहरु पाइन्छ […]
मलद्वारमा रहेको भेरिकोज नलीमा दवाव परेमा पायल्स हुने गर्छ । भेरिकोेज नलीमा दवाव परेमा उक्त नली चर्कने, फुट्ने वा त्यसमा चिरा पर्ने गर्छ । यसले मलद्वारमा पीडाा हुनुका साथै मल त्याग गर्नमा कठिनाई हुने गर्छ । सामान्य व्यक्तिमा पाइल्सले खासै गम्भीर समस्या निम्त्याउदैन । तर, रगत पातलो गर्ने औषधिको सेवन गर्नेहरुमा पायल्सले लिभर सिरोसिसको समस्या […]
बैवाहिक सम्बन्ध बर्वाद पार्ने पुरुषका ५ आदत, आजै बदल्नुस्
काठमाडौँ — बैवाहिक सम्बन्ध भनेको यस्तो बन्धन हो जसलाई बलियो बनाउन दुबैतर्फबाट बल लगाउनुपर्छ । अन्यथा यो बन्धनको धागो कहाँबाट कतिबेला चुटिन्छ पत्तै हुँदैन । त्यसैले एकअर्कालाई बुझेर हरेक निर्णयहरु समझदारीमा लिनुपर्दछ । तर पनि जानअन्जानमा कहिलेकाहीँ हामीबाट यस्ता सानातिना गल्तीहरु भइरहेको हुन्छ । त्याे गल्ती थाहै नपाइ हाम्रो सम्बन्धमा नै दिनानुदिन असर गर्दै गइरहेको […]
गाईको गहुँतबाट एक सय ४८ प्रकारका रोग निको हुन्छ
स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ। स्थानीय गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टेरोल (रगतमा हुने बोसो) ले सन्तुलन गराउनुका साथै मुटुरोगका लागिसमेत लाभदायक हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका छन्। […]
कोठामा कोइला र हिटरको प्रयोग त गर्दै हुनुहुन्न ?
देशभर अहिले चिसो बढेको छ । सकेसम्म घरभित्र चिसो नछिरोस् भनेर झ्याल÷ढोका सबै बन्द गरेर राखिन्छ । साथै, कोठा र शरीरलाई न्यानो बनाउनको लागि हिटर, कोइला आदिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । तर, यस्ता कुराहरु प्रयोग गर्दा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा भने कमैले मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । […]
यि गुण भएकी नारी घरमा छिन् भने तपाईंको घर स्वर्ग समान
भनिन्छ एउटा सफल पुरुषको पछाडि एकजना असल नारीको भूमिका हुन्छ । हुनपनि असल नारी भएको घर नै स्वर्ग समान हुन्छ । शास्त्रले पनि यहि बताउँदै आएको छ की असल नारी कुनैपनि घरको गहना हो । यहाँ हामीले नारीमा हुनुपर्ने केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन गुण हुने नारीहरु भएको घर स्वर्ग समान हुन्छ । […]
आज काग तिहार, राजा कागको सङ्ख्या विश्वमै कम
काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । यमपञ्चकको पहिलो दिन कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन शनिबार काग पूजा गरी मनाइँदैछ । यसै दिनदेखि पाँच दिनसम्म यमराज मत्र्यलोकको विचरणमा रहेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । यो दिन कागलाई भोजन गराउँदा पितृले सोझै पाउँछन् भनिन्छ । कागलाई यमदूत मानिएको छ । काग धुरीमा कराउँदा, कागले मैथुन गरेको देखेमा अशुभ […]
भाइटीकाको मिति विवाद र समाधान
भर्खरै हर्ष उल्लासका साथ नेपालको पहिलो ठुलो चाड विजयादशमी अधिकांशले मनाएर नेपाली जनमानसबाट बिदा भइसकेको छ । अब नेपालको दोस्रो ठूलो चाड तिहार भित्रिँदै छ । दशैं मान्नेले जस्तो सबैले एकै साथ एकै दिन यो तिहार नमनाउने स्थिति देखापर्दै छ किनकी यस वर्षको तिहारको तिथि मिति भने द्विविधापूर्ण रहेकोे देखिन्छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको आधारमा […]
यस्ता महिला चाहन्छन् पुरुष
मानव सृष्टिका लागि महिला र पुरुष दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण एवं एक–अर्काका परिपूरक हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा प्राकृतिक सृष्टि सञ्चालन सम्भव छैन तसर्थ महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले पनि विवाह नामक संस्कार सम्पन्न गर्ने सनातन परम्परा छ । यसका लागि महिला–पुरुष दुवैले आफ्नो रुचिअनुरूप विपरीत लिङ्गी छनोट गर्छन् । यसमा […]
महिलाले कहिलै थाहा नपाउने पुरुषका यी कुराहरु
महिलाहरू पुरुषका बारेमा खासगरी आफ्ना श्रीमान् वा प्रेमीका बारेमा आफूलाई सबै जानकारी भएको भ्रममा हुन्छन् तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । महिलाहरूले पुरुषका बारेमा थाहा पाएँ भनी सोचेका कतिपय कुरा भ्रमपूर्ण हुन्छन् वा ती रहस्यले भरिएका हुन्छन् । – पुरुषहरूमा इगो धेरै हुन्छ । उनीहरूले मनमनै गल्ती महसुस गरे पनि त्यसलाई बाहिर दर्शाउँदैनन् । पुरुषहरू आफ्नै […]
महिनावारी हुदा हिन्दु समाजमा मन्दिर प्रवेश नगर्नु भनेको छैन । पर बस्नु भनिन्छ ।यो महिनावारीमा दिएको छुट्टी हो । तिम्रो शरीर बाट रगत जादा तिमि कमजोर हुन्छौ भनेर आराम दिएको छुट्टी हो ।प्राचीन संस्कारको संस्कृती पछाडीको ज्ञान हेर्ने गरौ।महिनावारीमा तिमी कोहि एक भन्दा अपवित्र हुदैनौ । मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर भन्दा संवेदनशिल ( […]
यस्ता कारणले गर्दा कहिले पनि बिहे नगर्नु होला “नत्र पछुताउनु पर्ला”
अधिकांश किशोर किशोरीहरुको विवाह छिट्टै हुने गर्छ, जो पछि गएर पछुताउँछन् । यद्यपि, उनीहरुले विवाह आफ्नो खुशीले गरेका हुँदैनन् । कसै न कसैको केही न केही बाध्यता हुने गर्दछ । यदि तपाईं बाध्यतामा परेर विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्नलिखित कारणहरुबाट प्रभावित भई विवाहको हतार नगर्नु होला । बढ्दो उमेरको चिन्ता प्राय: परिवारका सदस्यहरुले तपाईंलाई ‘उमेर […]